Aasaaska doonista ... fikrad waalan oo aan in badan ka doodayay. | Laga soo bilaabo Linux
Aasaaska Doonista idea fikrad waalan oo aan in badan ka sheekaynayay.
nano | | Aplicaciones, Naqshad, GNU / Linux
GIMP, Inkscape iyo Qase waa saddexda tixraac ee waawayn ee naqshadeynta softiweerka bilaashka ah sidoo kalena waa saddexda qalab ee loogu jecelyahay naqshada adduunka GNU / Linux, mid kasta oo iyaga ka mid ahi waa kan doonaya inuu hor istaago dhiggiisa milkiilaha oo dhammaantood doonaya inay u tartamaan si fool ka fool ah wejiga ka soo horjeeda.
GIMP waa tartamekalluun majiraan, fadlan, ma ahan hal de Photoshop; waxay soo saartay cusbooneysiinteeda ugu dambeysay waxayna ku guuleysatay inay dayactirto waxyaabo badan oo ka mid ah cilladaheeda, iyada oo u ballanqaadaysa ma aha oo kaliya wareeg deg deg ah oo fudud, laakiin sidoo kale horumarin weyn oo ku saabsan isdhexgalka qalabka farsamada iyo qalabka midabka muuqaalka ah waxayna muujisay nooca 2.8 ayaa la raray oo diyaar u ah inuu si xoog leh u isticmaalo; maaha in la xuso inay tahay muunad ka mid ah waxa ku soo socda noocyada mustaqbalka.
Inkscape, kan istaaga Adobe Illustrator, Waxay ku jirtay qaabkeeda 0.48.3.1 in muddo ah laakiin runtu waxay tahay inaysan xumaan haba yaraatee oo waxay leedahay hufnaan ballaadhan, inkasta oo uusan war badan ka hayn barnaamijkan, haddana horumarkiisu wuu sii socdaa, aamusnaanta oo keliya, laakiin waa joogto waxayna mar horeba hayaan ilaa nooca ay tahay 0.49, oo imanaya uun kadib markii la sii daayay ee ugu dambeeyay ee ay xasilloon tahay, 0.48.4horumarka hadda socda oo ay weheliso 0.49)… Sida ku cad khariidadooda, waxay ku dhowdahay inay dhammeeyaan sifaynta dhammaan 0.48 nooca waxayna leeyihiin qayb wanaagsan oo ka mid ah nooca 0.49 ee horumarsan oo wararka waa la arki karaa Halkan. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn in Inkscape leedahay waa in ay wax ka qaban qaab caadi ah W3C, qaabka SVG, sidaa darteed wax wadaagga ku shaqeeya qaabkaas ayaa aad uga fudud, ama uguyaraan taasi waa waxa dhowr naqshadeeyayaal xafiis ka adeegsaday ii sheegeen Inkscape e muujiye, labadaba iyagoo adeegsanaya qaab SVG.
days, Naqshadeynta 3D aqoonsi leh oo aad u awood badan iyo barnaamij animation ah. Tartan toos ah ka wuxuush sida Autodesk Maya. Ka hadalkeeda waa mid kale, maadaama horumarkiisu yahay mid joogto ah oo aad u firfircoon, waxayna leedahay beel aad u tiro badan oo isticmaala, oo ay ku jiraan aasaaskeeda; Aasaaska blender… si fudud oo ka mid ah jawharadaha barnaamijka bilaashka ah oo ay la socdaan LibreOffice, KDE, Gnome, iwm ...
Hagaag, hada si toos ah ayaan u guda galay mawduuca, waxaan ku doodayay dhowr maalmood (hab ilbaxnimo leh) fikrad la yaab leh oo ka dhex dhacda dagaal caadi ah oo u dhexeeya laba naqshadeeye saaxiibbaday ah, mid baa adeegsada GIMP e Inkscape si loo sameeyo shebekadaha internetka iyo xayeysiisyada, iwm ... halka kan kalena uu u heellan yahay naqshad daabacan oo uu yahay taageere naqshadeeye caadiga ah Apple + Adobe (iyadoon la rabin cay). Su'aashu waxay soo ifbaxaysaa days, barta dhexe oo labaduba aqbalaan inay doorbidaan isticmaalka days karti-xirfadeedka si aad uga sii baran badan waxyaabaha sida Maya (koorsooyinka aasaasiga ah waxay ku kacayaan 5 kun oo doolar sida ay sheegeen) iyo qadarinta weyn ee aasaaska days kaqeybgalka mashaariicda sida Syntel, taas oo muujineysa awooda iyo awooda barnaamijkaaga.
Markii aan cabbaar la hadlay oo aan dhagaystay iyaga oo ka wada hadlaya sababta tan ama tan, waxyaabo aanan ugu talo gelin inaan halkan ku muujiyo, fikradda cajiibka ah ee «Kawaran haddii fursad GIMP, Inkscape y days, saddexda koox ee kobcinta aasaasiga ah iyo bulshooyinkoodaba, ma isugu yimaadaan hal aasaas?»Dhamaanteen waan wada fikirnay daqiiqad ... Nacalad, suurta galnimada midaas oo kale waligay maskaxdayda kuma soo dhicin, halkaasna waxaan ka bilownay inaan qiyaasno sidii inaan nahay kuwa go'aan ka gaaraya haddii taasi runti dhici doonto ... waa hagaag, fikradda si xun looma soo kicin waana jeclaanlahaa inaan kula soo qaado.
1 Aasaasid naqshadaysan oo leh softiweer bilaash ah ... ma jiraan wax waalan ama taas oo faragelineysa horumarinta qalab kasta
2 Iyagoo ku wada jira nidaam deegaan oo bilaash ah iyo aasaas aasaas, waxay qaadan karaan fikradaha aasaaska Blender Foundation iyo is-maalgelinta
3 Way fududahay in la helo kafaalaqaad
4 Awooddu waxay ku jirtaa ku biirista
Aasaasid naqshadaysan oo leh softiweer bilaash ah ... ma jiraan wax waalan ama taas oo faragelineysa horumarinta qalab kasta
Waxay ahayd waxa ugu horreeya ee aan isku daynay, in isu imaatinku uusan u baahnayn inuu beddelo horumarinta aalad kasta; mid kastaa wuu gaari karaa go'aankiisa iyo in ujeeddada aasaaska noocan ahi ay noqonayso in la mideeyo beelaha lana helo taageero is-dhaafsi heer farsamo ah oo u dhexeysa mashruuc kasta. Kaliya wax uun sida caawinta haddii loo baahdo.
Iyagoo ku wada jira nidaam deegaan oo bilaash ah iyo aasaas aasaas, waxay qaadan karaan fikradaha aasaaska Blender Foundation iyo is-maalgelinta
Caqli gal maaha days si toos ah ayaa loo isaga maal-galiyaa nuucyada noocan ah; iibiso DVD-ga ee Syntel iyo mashaariic kale oo ay weheliso shaxanka iyo agabka qalabka (bilaash) lagama maarmaan u ah in la furo wax kasta oo loo qabtay si loo gaaro filimka gaaban, oo si fudud u muuqda; sidaas… Maxaa diidaya in sidaas oo kale loo sameeyo laakiin qalabkoo dhan la isticmaalo? beel kastaa waxay lahaan lahayd wax ay ku biiriso mashruuc gaar ah aakhirkana, dhammaantood waxay ku dambeeyaan ka faa'iideysiga.
Sidoo kale, qof kastaa wuxuu si deggan u sameysan karaa wax soo saarkiisa ama dhacdooyinkiisa, oo uu iibin karaa waxyaabaha noocan ah, si uusan taajir u noqon laakiin uu wax u baro oo uu u joogteeyo nafsadiisa, waxay u egtahay cadaalad inay lacag ku kasbadaan dadaalkooda iyo sidoo kale in lagu maalgeliyo wixii ka baxsan deeqaha.
Way fududahay in la helo kafaalaqaad
Halbeeg fudud ayaynu ku heshiinay in saddexdaas wadajirka ahi ay dad badan ka dhaadhicin karaan inay ikhtiyaar u leeyihiin tixgelinta iyo tusaale ahaan, haddii GIMP awooday inuu ka helo kafaalo qaadis AMDKa fikir in seddexdan ay isu yimaadaan si ay u shaqeeyaan oo ay u abuuraan mashruucyo xiiso leh si ay u muujiyaan waxa ay hayaan iyo waxa ay qaban karaan… waa suurta gal aad u soo jiidasho leh.
Awooddu waxay ku jirtaa ku biirista
Oo waa sidaas, in badan ayaa leh imaatinka Adobe a Linux noqon lahaa waxa kaliya ee ka maqnaa GNU / Linux si kaamil ah, wax badan ka dib Madax imaanshihiisa ka dhig mid rasmi ah Linux... si fiican maya, anigu ma taageersani Adobe en Linux, maahan sababtoo ah waa software tayo liita laakiin maxaa yeelay waxaan horeyba u helnay musharixiin qaan gaar ah oo karti leh oo kaliya u baahan riix xoog leh (in ka yar days taas oo horeyba waxbadan u guuleysatay kaligeed) ...
Mustaqbalka fog waa uun fikrad, fikrad aan jeclaan lahaa inaan kala hadlo dad badan oo aqoon u leh mawduuca iyo in kale oo aan arki karo ra'yigooda; Oo maxaa diidaya? Sidoo kale, haddii dhammaantood ay u yimaadaan wax la taaban karo, u soo bandhig xubnaha kooxda qalab kasta.
Waxaan uga tagi doonaa mowduuc barta si aan si awood leh ugaga hadlo mowduuca si aad ufiican oo, inkasta oo aan faallooyinka u daayo, hadana waxaan rajeynayaa inaad sifiican uqaadi doontaan wadada kulanka, taas oo kafiican doodaha naftooda u dhiibaya jawaabo aad u dheereeya oo adag ... isaga ka yimid, fadlan 😉
Dood ku saabsan madasha Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Aasaaska Doonista idea fikrad waalan oo aan in badan ka sheekaynayay.
Foojarka. Laakiin ha ilaawin Scribus. Oo horaanba loo dhigay, miyaanu Synfig ama wax la mid ah fiicnaan lahayn? Ama miyaadan ku darin maxaa yeelay uma maleynaysid inay ka soo bixi doonaan hawsha (si kale haddii loo dhigo, oo ay la mid yihiin vibes wanaagsan sida maqaalkaaga)?
Runtu waxay tahay in, laga yaabee, inay wada jiraan (in kasta oo ayna sidaa isugu dhowayn) waxay horayba wax u sameystaan, mar horaba wax bay samaynayaan.
Waxa in yar i cabsi galiya ayaa si sax ah u ah in midowga uu ku yimaado xoog. Isku soo uruurinta awooddu iima xaqiijinayso (waxaan u malaynayaa inaan loo baahnayn in tusaale lagaa siiyo, sax?)
Dhinaca kale, firidhkan, sida ku dhacda noocyada kala duwan ee Linux, ayaa ah waxa na siinaya xorriyad aad u badan, in kasta oo ay tahay "saamaynta labaad" ee ku kala firdhinta aqoonta iyo kartida. Xaqiiqdii haddii qeybinnada kaladuwan ay isu imaan lahaayeen waxay lahaan lahaayeen xoog badan, laakiin fiiri sida aan u fiicanahay taas la'aanteed. Ka gudbay ugu yaraan, aniga ahaan aad u hooseeya, waxaan doorbidaa xorriyadda awoodaha waaweyn.
Haye, ma dhamayn doono duudduubkan adiga oo aan kuugu hambalyeyn maqaalkaaga, kaas oo aan ka helay milicsi aad u xiiso badan kaas oo furaya dood aad u xiiso badan oo aan kuugu mahadnaqo inaadan rabin waqti kasta inaad "dhiig ka dhigto" dadka isticmaala labada dhinac.
Waxaan jeclaan lahaa inaad ku dhex marto mowduuca madasha maxaa yeelay waxaan ilaaway waxyaabo ay ka mid yihiin Mypaint iyo Scribus, waa sababta aan u abuuray mawduucaas, maxaa yeelay waan ogaa inaan ilaaway faahfaahinta.
Marka laga hadlayo doorbidida xorriyadda awoodaha, sidoo kale aniga sidoo kale, laakiin waxaa jira waqtiyo, tusaale ahaan nolosha xirfadeed, marka waxsoosaarkaagu uu ku tiirsan yahay isla awoodaha aaladdaada maxaa yeelay ... waxaad si dhakhso leh u wadaysaa ciddiyaha leh xD dubbe wanaagsan
Mypaint sidoo kale waa cabsi. Waxba in laga masayro Rinjiraha.
Tani waa wax aan ka fikiray sidoo kale weyna fiicnaan laheyd, marka lagu daro waxay noqoneysaa dhiirigelin weyn dhammaan qalabkaan naqshadeynta weyn.
Kaliya way fiicnaan laheyd 🙂
Midig, waxaan qiyaasayaa: "Aasaaska qaabku wuxuu soo bandhigayaa: Suugaanta Naqshadeynta Furan" ee qaabka Suite Hal-abuurnimo. Iyo inay la timid seddexda alaab iyo qalab, ama in shay waliba si gooni ah loo soo dejisan karo, qurux * - *
Runtii markaan ka war helay qorshayaasha Adobe ee Linux runtii aad baan u farxay maxaa yeelay waxaan bilaabay inaan ku riyoodo Photoshop-ka deegaannada GNU laakiin maalin maalmaha ka mid ah markii aan caajisay oo aan furay Synaptic si aan dib ugu eego sharraxaadda codsiyada halkaas yaal, waxaan helay Qalabka animation-ka iyo xaddiga waxyaabaha uu leeyahay GIMP (oo ay ku jiraan isticmaalka filtarrada PS) Waxaan go'aansaday inaan wax yar ka barto tan oo tanina waa kiiska xitaa ma fiiriyo PS markaan joogo guriga aabbahay (Ma ha ka saaro Windows 7-ka uu rakibay) walaalkay wuxuu adeegsadaa Photoshop si uu u sameeyo "montages".
Waan jeclahay fikradda 😛
Waxaan ku adkeysanayaa, wax ku darsiga ama fikradda ama haddii aad rabto inaad kiciso doodda, waxaan leenahay mowduuca u furan madasha qaabeynta ee desdelinux
Qalab aad u tiro badan oo bilaash ah ayaa jira iyo kuwa kale oo adeegsanaya kuwa kale isla markaana jajabinaya barnaamijyada si ay u socodsiiyaan, shaqsi ahaan u dhuux inta yar ee aan u isticmaalay waa igu filan tahay waana haystaa igu filan, mawduucayga kale ee mustaqbalka wuxuu noqon doonaa Blender, kaliya arag fiidiyowyada awooda in lagu sameeyo barnaamijkaas waa wax cajiib ah. Wixii wax aysan waligood gacmahooda ku heli karin Linux ayaa jira.
Waxay umuuqataa fikrad aad ufiican, laakiin marka laga eego aragti kale. Waxaan rumeysanahay in jiritaanka a "The Design Foundation" ay ku saleysnaato fikradda taageerida adeegsiga qaabab bilaash ah, qaabab furan oo la faafin karo oo saldhig u ah Naqshadeynta Bilaashka ah, sidaa awgeedna aan u taageerno barnaamijyo taxane ah oo naqshadeysan sida kuwa la soo sheegay hore. Waxaan tan uga leeyahay aragtida maareynta mashruuca, maadaama magaca sidan oo kale ah (The Design Foundation) uusan ku habboonayn ujeedo aysan ku lug lahayn oo keliya xirmooyin xirmooyin software ah, laakiin u oggolow noocyada kala duwan ee xirmooyinka barnaamijka bilaashka ah naqshaddu meel bay leedahay. Xusuusta ereyadii xikmadda lahaa ee Richard Stallman ee ku saabsanaa caqabadaha hortaagan softiweerka bilaashka ah, wuxuu yiri "modus operandi" ee soo saareyaasha softiweer ee lahaanshaha waa inay faafiyaan qaab (si muuqata u xiran) ka dibna ay ku gacan sareeyaan suuqa software-ka isticmaala qaabkaas, iyo Tani waa xaqiiq adag oo arxan daran. Microsoft Office maahan softwareka xafiiska ugu isticmaalka badan sababtoo ah awooda weyn ee Microsoft, laakiin istiraatiijiyadda ka dambeysa faafitaanka qaabka. Dad badan ayaa tixgeliya qaabkii hore ee .doc qaab ahaan taas oo ah qalad aad u xun oo ka hor istaagay qaabka ODF (sidaa darteedna OpenOffice - LibreOffice suite) in si ku filan loo faafiyo. Tusaalahaan la siiyay waxaan u maleynayaa inaysan muhiim ahayn in la xuso tusaalaha flash iyo Adobe. Tusaalaha kale ee walwalka leh ayaa ah midka Autodesk (Autocad) .dwg, kaas oo ficil ahaan gebi ahaanba niyad jabinaya horumarinta barnaamijka CAD ee bilaashka ah. In kasta oo Hay'adda GNU Foundation ay tallaabo ka qaadday arrinta ku saabsan isku dayga ah inay horumariso qaab bilaash ah oo loogu talagalay CAD, shaqadu aad bay u adkaatay maaddaama aysan taageero ka helin horumariyeyaasha iyo adeegsadayaasha ku takhasusay CAD. Tani waa qaybta ugu muhiimsan ee arrinta: horumarinta "bulshada". Taasi waa inay noqotaa mid ka mid ah howlaha aasaasiga ah ee ka horreeya isticmaalka xirmo kasta oo Software ah; bulsho la'aantood macquul maaha in la helo mashruuc noocan oo kale ah oo guuleysta. Mid kale oo ka mid ah ereyada xikmadda leh ee Stallman (iyo mid ka mid ah ereyada sida aadka ah looga dhaga tiray adduunka ee software-ka bilaashka ah) ayaa ah in dukumiintiyadu ay MUHIIM U YAHAY faafinta Software-ka Bilaashka ah. Waxaan ku ogaaday tan gaar ahaan naqshadeeyayaasha Latin America, oo sheegaya inay jiraan waxyaabo aan lagu qaban karin Gimp iyo Photoshop. Waqtiga intiisa badan waxay ka hadlaan waxyaabo aan diiwaangashanayn laakiin taas la samayn karo (ama aqoon darri ku timaadda suurtagalnimada 'Gimp') iyadoo si toos ah barnaamijka ama loo sii dheereynayo; Waxay sidoo kale dhacdaa inay tahay macluumaad lagu diiwaangeliyey Ingiriisiga (qaybtan haddii ay ku saabsan tahay xiisaha dhinaca naqshadeeyayaasha Latin ee barashada Ingiriisiga). Tusaale waa Krita. Krita kartideeda wali lama oga; Waxaa jira casharro fiidiyoow ah oo fiidiyow ah oo cusub oo ka soo baxa waxyaalaha waaweyn ee lagu sameeyo Krita, laakiin midkoodna waxyaabahaas lama diiwaangelin, badankood waa xirfado lagu kasbaday sannado badan oo khibrad ah oo ku saabsan software-ka, qaar badan oo Krita isticmaalayna way ogyihiin in dukumintiga rasmiga ahi yahay sabool ah (maaha in la yiraahdo wax aan jirin, marka laga reebo inta badan Ingiriisiga). Tusaale kale ayaa ah isbadalkii udambeeyay ee isbadalkii udambeeyay ee nooca 2.8 ee Gimp, kaas oo doonayay inuu ku qanco doorbidida isticmaaleyaasha ka imanaya Photoshop, oo aan garanaynin sababta ay qalabka Gimp sabeynayeen, sababaha la xiriira isdhexgalka isticmaala Software-ka iyo isticmaalka cabirka shaashadda, sababaha adeegsiga ayaa la iska indhatiray iyada oo loo roon yahay in la raadiyo sawir-gacmeedka Photoshop oo bilaash ah. Waxaan u maleynayaa inaan aqriyay faallooyin intaas ka sii sii dheeraa, oo xitaa loo gudbiyay abuurista qeybinta naqshadeynta Linux, taas oo i xusuusineysa laba arrimood: "kabo-toosiye kabahaaga" iyo "waa inaanan dib u cusbooneysiin shaagagga." Waxay noqon laheyd qashin aad u badan oo ilaha aadanaha iyo farsamada ah oo loo isticmaali karo in lagu gaaro ujeeddooyinka qasabka ah, sida sameynta barxad furan oo bilaash ah oo loogu talagalay tababarka sare ee naqshadeynta aaladaha bilaashka ah, barashada kartida qaababka qaabeynta bilaashka ah ee laxiriira qaabeynta. (SVG tusaale ahaan), tababar ku saabsan Blender, tababar ku saabsan kor u qaadista xarumaha loogu talagalay naqshadeynta Linux, waxyaabo sidaas oo kale ah. Marka la eego maalgelinta, waxaa suurtagal ah in la raaco qaabka kiisaska ugu guulaha badan, sida "Aasaaska Dukumiintiga", "Linux Foundation" iyo "GNU Foundation" tusaale ahaan.
Erayo la'aan, fikirkaaga ayaan dul dhigay mowduuca madasha
Faallo aad u wanaagsan. Waa in xooga la saaraa horumarinta iyo adeegsiga qaabab bilaash ah. Tani waxay sidoo kale hagaajinaysaa iswaafajinta.
Waxa hadda jira waa kulan muuqaallo bilaash ah. Waxay qabtaan shir sanad walba halkaasoo labada horumariyayaal iyo farshaxanada garaafku ay ka soo qayb galaan (iyaga oo aan u sii dhaafin David Revoy ama Ramón Miranda), waxaan u malaynayaa inay hore u yaqaaneen.
Waxaan si daacad ah u aaminsanahay in nashqadda ugu horumarsan ee Linux ay tahay isku dhaf. Gimp aniga ahaan waa caajis (taasi waa ra'yigeyga mana doonayo inaan wax ka dhimo) krita waxay umuuqataa mid igafiican aniga (in kasta oo horumariyayaashu ay xoogaa go'aansadeen inay ka fogaadaan dib u soo celinta sawir qaadista).
Muuqaal kale oo aad u caafimaad qaba ayaa ah horumarka RAW. Maanta waxaan haynaa saddex barnaamij oo bilaash ah oo aad u awood badan: photivo, darktable iyo rawtherapee. Marka lagu daro kuwa kale ee aan xumeyn Ufraw iyo rawstudio.
Ku jawaab algoban
Dhanka naqshadeynta, ha ilaawin in ay jiraan diskooro horeyba u soo xirxiray barnaamijyo badan oo loogu talagalay naqshadeynta, sida istuudiyaha ubuntu, fedora design suite, aperturelinux, artistx, oo loogu talagalay qaabeynta cad waa CAELinux distro, fiiri.
Aniga iima muuqato waali aniga, in la abuuro "suite" naqshadeyn ah. Mabda 'ahaan waxaan ku sharxi lahaa "ku biirista" inkscape iyo gimp taas oo sahlan. Nooc ka mid ah "Gimpscape" oo midkiiba ugu fiican yahay.
Qarsoonku wuu fiicanyahay, marar badan baan u isticmaalaa, waxaan kaliya u baahanahay inaan hagaajiyo isticmaalka xusuusta iyo xawaaraha faylasha la qaadi karo markii ay aad u weynaadaan (oo leh noodhadh badan) waxay noqoneysaa mid gaabis ah. Waxaan hayaa waxyaabo lagu qabtay Corel Draw 4 (laga soo bilaabo 1995) taas oo ah Inkscape weli suurtagal maaha in la sameeyo.
Gimp waa gabadhayda qurxoon. Waxaan isticmaali jiray Ps iyo Gimp ilaa 90-maadkii wayna ila weynaadeen. Ma qiyaasi karin nolosha aan lahayn Gimp-ga, waxaan u isticmaalaa maalin kasta sawir, wax walba ... Midda kale (Ps) ee aan u haysto shaqada, Gimp weli waa iga maqan tahay markii aan la shaqeynayay feylasha qaarkood iyo cabbirro aad u ballaaran. In kasta oo waqtiga la joogo waxaan hubaa inay suurtagal noqon doonto.
salaan horay loogu sii wado mashruucaas oo aad u xiiso badan.
Anigu ma ihi nashqadeeyaha noocuu doono ha ahaadee, laakiin waxaan haystaa oo aan adeegsadaa (in kastoo, aan runta u sheego, hawlo aad u fudud) Inkscape iyo GIMP.
Waxaan jeclahay fikradda hal beel. Xitaa, feker ahaanteyda, way fiicnaan laheyd in SADDEXDA codsi loo qaybiyo sidii suite.
Fikradaha Utopia saaxiibkay, hee, laakiin ...
Maxaa software bilaash ah i baray, in aysan macquul aheyn in lagu guuleysto 🙂
Skype for Linux ma dhiman, kooma ayey ku jirtaa.